Ndị isi ihe nkiri Spanish, olee ndị ama ama? | Nye m oge ntụrụndụ
Cinema bụ otu n'ime nka a na -akwanyere ùgwù nke ukwuu n'ụwa, nke enweghị ike ịdị na -enweghị atụmatụ na -atọ ụtọ. Ka o sina dị, Agbanyeghị na anyị nwere akụkọ pụrụ iche nke nwere nnukwu ike, ọ nweghị ihe ga -eme ma ọ bụrụ na ọ nweghị ọrụ dị mkpa nke onye nduzi. Ọrụ onye nduzi ihe nkiri bụ ịdekọ ndekọ ahụ wee mee ka ọ bụrụ ngọngọ. Ihe nkiri sinima nwere ọtụtụ onyinye ma taa m ga -agwa gị ntakịrị ihe gbasara akụkọ ihe mere eme ndị isi ihe nkiri na Spanish anyị nwere taa.
Otu ọrụ dị mkpa nke onye ntụzi bụ ime ntakịrị ihe niile! N'ụzọ bụ isi ọ bụ ya na -ahụ maka imezu na ịkọ akụkọ n'ụzọ dabara adaba maka ndị na -ege ntị. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ ahụ na -eme mkpebi ndị bụ isi, dịka ọmụmaatụ: ime edemede, ịhọrọ ụda ụda, inye ndị na -eme ihe nkiri ndụmọdụ, na -ahụ maka onyonyo nke ihe nkiri ọ bụla na akụkụ igwefoto n'oge ịse foto. Mana na -atụnyekarị ọhụ banyere ka o si bụrụ na a ga -agwa akụkọ ahụ na ihe ndị dị oke mkpa dị ka ịchọpụta ụdị gburugburu ebe obibi. N'okpuru, m na -egosi atọ n'ime ndị isi ihe nkiri Spanish a kacha mara amara ka anyị wee ghara ịhụ ihe nkiri ha ọ bụla.
4 Kedu maka ndị isi ihe nkiri Spanish ndị ọzọ?
Ọ na-ewere dị ka otu n'ime ndị isi ama ama na mpụga obodo ya n'ime iri afọ gara aga. Amụrụ ya na Calzada de Calatrava na 1949 n'ime ezinụlọ nke mkpọda. Ọ bụ ụmụ nwanyị gbara ya gburugburu na -agba ya gburugburu mgbe niile, ndị bụ nnukwu ihe mkpali maka ọrụ ya. Mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, ọ kwagara n'obodo Madrid ịga mụọ sinima; agbanyeghị ụlọ akwụkwọ ahụ emechiela n'oge na -adịbeghị anya. Ihe omume a emeghị ka Almodovar bụrụ ihe mgbochi ịmalite ụzọ ya. Ọ banyere n'egwuregwu dị iche iche wee malite ide akwụkwọ akụkọ nke ya. Ọ bụ rue 1984 mgbe ọ malitere ime ka amara ya site na ihe nkiri Gịnị ka m mere ka m wee nweta ihe a?
Stylezọ ya na -ebibi Spanish bourgeois costumbrismo ebe ọ na -anọchite anya ihe dị adị n'ọrụ ya nke na -esiri ike mgbe ụfọdụ itinye ọnọdụ nke oke oke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Na -ekwu banyere isiokwu ndị na -esekarị okwu dị ka: ọgwụ ike, ụmụaka akaghị aka, mmekọ nwoke na nwoke, akwụna na mmegbu. Ma ọ dịghị mgbe ọ na -eleghara ya anya njirimara oji na enweghị ọchị. Ọ tụlere ndị na -eme ihe nkiri Carmen Maura na Penelope Cruz dịka otu n'ime ndị na -eme ihe nkiri na egwu.
N'ime ọrụ ya ndị bụ isi anyị na -ahụ:
Ihe niile gbasara nne m
Akpụkpọ M Biri na Ya
Gwa ya okwu
Ifuru nke ihe nzuzo m
Akpụ ụkwụ ụkwụ
Ọ bụ onye mmeri nke Oscars abụọ: na 1999 ekele "Ihe niile gbasara nne m" na na 2002 maka edemede "Gwa ya okwu". Ọzọkwa, enyela ya ọtụtụ Golden Globes, BAFTA Awards, Goya Awards na ememme Cannes. Ọ dị mkpa imesi ike na na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime ndị isi ihe nkiri Spanish kacha mma; Ọ bụkwa onye na -emepụta ihe na -eme nke ọma na onye na -enyocha ihuenyo.
Site na nne sitere n'asụsụ Spanish na nna Chile, anyị na -ahụ mba abụọ na onye ntụzi a nke ọ na -akwado ugbu a. A mụrụ ya na Machị 31, 1972 na Santiago de Chile na afọ sochirinụ ezinụlọ kpebiri ịkwaga Madrid. Ihe okike ya malitere ịmalite site na nwata mgbe o gosipụtara oke inwe mmasị maka ide ihe na ịgụ ihe, yana ide isiokwu egwu. A na -ahụta ya dị ka otu n'ime ndị isi na -eme nke ọma, ndị na -ede ihe onyonyo na ndị dere oge anyị maka nka nke asaa.
na Ọrụ mbụ Amenábar mejupụtara obere ihe nkiri anọ wepụtara n'etiti 1991 na 1995. Ọ malitere inweta aha ya na 1996 site na mmepụta "Thesis", thriller nke dọtara uche dị egwu na Ememe Ihe Nkiri Berlin wee merie Goya Awards asaa. Na 1997 ọ mepụtara "Abre los ojos", ihe nkiri akụkọ sayensị nke kpochapụrụ ememme Tokyo na Berlin. Nkata ahụ hapụrụ onye na -eme ihe nkiri America Tom Cruise nke ukwuu nke na o kpebiri inweta ikike ime mgbanwe nke ewepụtara na 2001 n'okpuru aha "Vanilla Sky."
Ihe nrụpụta nke atọ nke onye ntụzịaka ahụ nwere nnukwu mmụọ bụ ihe nkiri a ma ama "Ndị ọzọ" nke Nicole Kidman nọ na ya. nke ewepụtara na ụlọ ihe nkiri n'afọ 2001. O nwetara ọkwa dị elu na nyocha dị mma; a na -edokwa ya dị ka ihe nkiri kacha elele na afọ na Spain.
Otu n'ime ihe nkiri kachasị ọhụrụ ebe ọ na -arụkọ ọrụ dị ka onye ntụzi bụ na 2015, nke akpọrọ "Nlaghachi azụ", nke gbara Emma Watson na Ethan Hawke.
Ụfọdụ utu aha ndị ọzọ o nyere dị ka onye ntụzi, onye na -emepụta ihe, onye na -ede abụ, ma ọ bụ onye na -eme ihe nkiri bụ ndị a:
N'ime oké osimiri
Ihe ọjọọ nke ndị ọzọ
Ire nke butterflies
Ọ dịghị onye maara onye ọ bụla
Amenábar nwere ihe nrite Oscar na akụkọ ntolite ya, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke onyinye Goya.
A mụrụ ya na 1945 n'obodo Barcelona, ​​nwere nwanne ejima wee si n'ezinụlọ dị umeala n'obi. Mmalitere ọrụ aka ọrụ ya mgbe ọ dị afọ 20 site na ịme mgbasa ozi na obere vidiyo nke ụfọdụ ìgwè egwu. Bayona ghotara Guillermo del Toro dị ka onye ndụmọdụ ya na onye ọ zutere n'oge Ememme Nkiri Sitges 1993.
Na 2004, onye edemede edemede ihe nkiri «The Orphanage» nyere Bayonne edemede ahụ. Mgbe ọ hụrụ mkpa ọ dị okpukpu abụọ mmefu ego na oge ihe nkiri a, ọ na-achọ enyemaka nke Guillermo del Toro onye na-enye aka imekọ ihe nkiri nke ewepụtara n'afọ atọ ka emechara na ememme Cannes. Obi ụtọ ndị na -ege ntị ji were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji iri!
Ọrụ ndị ọzọ kacha dị mkpa nke onye isi ụlọ ọrụ kwekọrọ na ihe nkiri a bụ "agaghị ekwe omume" na -ese Naomi Watts wee wepụta ya na 2012. Nkata ahụ na -akọ akụkọ gbasara ezinụlọ na ọdachi nke mere n'oge mbufịt mbufịt India nke 2004. Ihe nkiri a jisiri ike wepụta onwe ya dị ka ihe ịga nke ọma na Spain ruo ugbu a, na -enweta nde dollar 8.6 n'oge ngwụcha izu mmeghe.
Tụkwasị na nke ahụ, na 2016 ihe nkiri "Nnukwu anụ na -abịa ịhụ m" pụtara na Spain. Nnukwu ihe ijuanya na -abịa mgbe onye nduzi ama ama Steven Spielberg na -ahọrọ Bayona ka ọ na -eduzi nkeji ikpeazụ nke Jurassic World na 2018: "Alaeze dara."
Kedu maka ndị isi ihe nkiri Spanish ndị ọzọ?
Obi abụọ adịghị ya, enwere ọtụtụ ndị na -ese ihe na -ebili. Anyị na -ahụ ndị nduzi dịka Icíar Bollaín, Daniel Monzón, Fernando Trueba, Daniel Sanchez Arévalo, Mario Camus na Alberto Rodríguez onye anyị na -ekwesịghị ileghara anya. Ọrụ ya na -amalite inweta aha n'ime ụlọ ọrụ ahụ yana atụmatụ ya.
Ndị isi ihe nkiri na -adabere na mmefu ego, na mgbakwunye na mgbochi ụfọdụ n'akụkụ ndị mepụtara akụkọ a. Agbanyeghị, ọrụ ya bụ ọkpụkpụ nke ọrụ sinima ọ bụla. Ọ bụ ezi nka ịkọwa n'ụzọ ziri ezi na imeghari echiche ndị ọzọ iji mee ka ha ruo nnukwu ndị mmadụ ma mee ka ha nwee ihe ịga nke ọma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Ndị isi ihe nkiri Spanish
Usoro ịhụnanya kacha mma